Gadzirisa iko kukanganisa muzuva uye nguva yeMac yako | Ndinobva mac
Iyo system zuva uye nguva zvakakosha kupfuura vazhinji vedu kufunga uye ndizvo havasi kungodzidzisa chete kuziva nguva uye zuva ratiri, asiwo akawanda masevhisi akabatanidzwa mukati mehurongwa pachawo anoshandisa ruzivo urwu kuzvivandudza, senge zviitiko zvekarenda, kuti vagone kumisidzana nemamwe masevhisi kuburikidza neinternet kana kungova kukwanisa kutumira kana kugamuchira mameseji. Ichi chikonzero nei tichifanira kubhadhara zvakanyanya kuti tione kuti chinhu ichi chakanyatsogadziriswa.
Kana zvese zvambotaurwa zvikasashanda sezvazvinofanira kuita, zvinokonzeresa kuti system yacho itizivise zvisirizvo nezvemisangano kana zviyeuchidzo pamwe neku "gurwa" uye kunyangwe iyo system isiri kuvandudza sezvainofanirwa.
Neraki izvi zvine mhinduro iri nyore nenzira yakapusa yekugadzirisa. Chinhu chekutanga chatinofanira kufunga nezvacho kuve neinternet kubatana uye kuve nechokwadi chekuti michina inogona kutaurirana neiyo yepamutemo server yakatsaurirwa kune iri basa. Kuti tiite izvi, isu tinotevera aya matanho:
Tichavhura iyo terminal (Zvishandiso> Zvishandiso> Terminal)
Tichanyora "ping -c 5", ichiteverwa nenzvimbo
Tichanyora iyo URL yeakatsaurwa nguva sevha, senge yepamutemo Apple "time.europe.apple.com" kana chero imwe SNTP kubva Iyi link.
Dhinda Enter kuti uite mutemo wePing.
Kana tichiita izvi isu tichaona akateedzana mhinduro kubva kuseva yakaratidzwa mumamiriseconds, izvo zvinotipa chiratidzo chekuti iri kushanda, kana pane zvinopesana nInodzorera "Unknown host" kana "Timeout" ndeyekuti pamwe pane dambudziko munzira kana sevha haina kubatika.
Kuti uone zviri nani zuva uye nguva, isu tichagara tichisarudza kubva pane zvaunoda system mukati iro Zuva uye nguva chikamu sevha iri padyo nenzvimbo yedu, mune iyi kesi, semuenzaniso "time.europe.apple.com".
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare nemaoko kumisikidza iyo NTP yekuvandudza sevhisi kuburikidza nemumwe kuraira muTerminal:
sudo kutangactl kutanga org.ntp.ntpd
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Zvaunofanira kuita kana Mac yako ikasaratidza zuva uye nguva nemazvo
Mhoroi, dambudziko rangu ndere rinotevera kana muchipinda zvido zvesystem uye kusarudza zuva uye nguva haina kupinda uye inogara ichirodha. Zvandinogona kuita?
Luis Abad Anouya akadaro
Mhoro Miguel Ángel;
Chekutanga pane zvese, makorokoto pazano uye neruzivo rwamunopa.
Ndine dambudziko neMac yangu (24-inch, kutanga kwa2009) inomhanya OS X El Capitan vs. 10.11.6
paunotanga wachi uye nezuva zvakasarudzwa.
Ndakaedza zvese, ndinofunga, Chenesa Mac yangu, Onyx, CCleaner, ...
Kubva kumagumo ne "sudo ntpdate -u time.apple.com", "ping -c 5 time.apple.com"
Otomatiki, echinyorwa zuva uye nguva marongero; isina mhedzisiro.
Ini ndatochinja bhatiri rinochengeta iyo wachi memory
(bhatiri) CR 2032 kubva kuPanasonic.
Asina kubudirira; Ini handizive kana itunes ichava nechokuita nazvo, hwindi rinondiudza
izvo zvisingakwanise kuratidza kuzivikanwa kweseva:
"Init.itunes.apple.com" uye kusvikira ndamisa zuva nezuva
Kuisazve iyo inoshanda sisitimu kunonetesa kwandiri kuti ndiisezve
mapurogiramu ese, plugins, ... uff !!
Ndinovimba unogona kundiraira kana kundibatsira.
Pindura kuna Luis Abad Cominches
Carlos Cabanillas Alva akadaro
Mhoro. Vakandiudza kuti ndaifanira kuchinja bhatiri reMac ndi2009. Uye ndeyekuti pese pandinobatidza Mac ndinofanira kumisazve musi nenguva. Ndeipi bhatiri uye ndingachinje sei? Zvakaoma kuzviita here? Ndatenda nerubatsiro rwako pamberi.
Pindura Carlos Cabanillas Alva